I-Seychelles yoKhenketho inyusa i-IFTM yeResa ephezulu kwiParis enomdla
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yoKhenketho inyusa i-IFTM yeResa ephezulu kwiParis enomdla
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Oktobha 1, 2021
I-Seychelles isiya kwi-IFTM ephezulu yeResa
I-Seychelles yezoKhenketho izakuthatha inxaxheba kumboniso omkhulu wokuqala wezorhwebo lwamanye amazwe okokoko kwaqala ubhubhane we-COVID-19, UNksk. Bernadette Willemin, uMlawuli Jikelele weNtengiso yeNdawo kwiSebe lezoKhenketho, ubhengeze ngaphambi kokushiya i-IFTM ephezulu yeResa eyenzeka eParis ngo-Okthobha u-5-8.
Urhwebo lokuhamba lubonisa iithagethi zoLonwabo, iQela, iShishini, kunye neMice kunye neziganeko zeshishini lokhenketho.
Ubukho bomzimba waseSeychelles baphosiwe kwaye kudala bulindelwe ngamaqabane ethu.
Ukhuphiswano luba yingcwangu kwaye njengoko abakhuphiswano bavulekele ukhenketho, kubalulekile ukuba iSeychelles ibonwe buqu.
UNkosikazi Willemin uzokujoyina umboniso wezorhwebo, ojolise kuLonwabo, kwiQela, kwiShishini, nakwiziqendu zeMICE kunye nezeMisitho, ngabameli baseParis beehotele zeBerjaya, iiNkonzo zohambo lweCreole, iNdlu yeMango yeLXR, kunye nohambo lukaMason. Abathathi-nxaxheba kwi-Intanethi bazakubandakanya iNorth Island, iKempinski Seychelles, kunye neBlue Safari Seychelles.
Ecacisa ngokubuyela ekuthatheni inxaxheba ngokwasemzimbeni kwezi ziganeko, UNksk. Willemin uthe, “Ngelixa sihlala siqhakamshelana nabo phantse, ubukho bethu bomzimba buye baphoswa kwaye kudala bulindelwe ngamaqabane ethu. Akumelanga silibale ukuba ukhuphiswano luba yingcwangu kwaye njengoko abo sikhuphisana nabo bavulela ukhenketho, kubalulekile ukuba nathi sibonwe buqu.
Sineentsuku ezine zokuqeshwa esele zicwangcisiwe kunye nabaqhubi bethu bezotyelelo, amaqabane ezorhwebo kunye neenqwelomoya. Siza kudibana noonondaba kunye namajelo eendaba ngaphandle kwendawo. Umboniso ufike ngexesha ingakumbi njengoko kugonyiwe iindwendwe zaseFrance akusafuneki ukuba ziyekiswa xa zibuyela ekhaya kwaye oku kunika amandla kubakhenkethi nakwamanye amaqabane ukuba badibanise iinkqubo zabo zobusika kwaye bathengise ngenkuthalo iiholide ukuya eSeychelles. Siza kongeza amandla okuhlala kunye nokunxibelelana okungakumbi phakathi kweParis neSeychelles nje ukuba iAir France yenze iinqwelomoya kabini eSeychelles ngexesha lasebusika ukusukela nge-28 ka-Okthobha. ”
Kulo nyaka, umboniso wenzelwe ukulungiselela "ukuthatha inxaxheba kwe-hybrid," UNksk. Willemin uthe, "Thina, kunye nawo wonke umntu kuye kwafuneka silungelelanise kwaye siphinde sisebenzise indlela esisebenzisana ngayo namaqabane ethu kunye nendlela esifikelela ngayo kubathengi bethu; kungoko sinika abalingane bethu basekuhlaleni eli thuba lokuba bathathe inxaxheba kulo mboniso wezorhwebo phantse nangobuqu. Ewe kuye kwanyanzeleka ukuba sinciphise umkhondo wethu, zombini ngokobungakanani bendawo yethu yokuma kunye nenani labantu abakhoyo, kwaye siyakuhlonipha onke amanyathelo ezococeko akhoyo. Iqela lethu eParis lizakusixhasa estendini. ”
Imakethi yaseFrance ibalulekile eSeychelles, njengoko indawo yentengiso yesibini ekhokelayo iye yanegalelo ngaphezulu kwe-11% yokufika kweendwendwe (43,297) nangaphezulu kwe-16% yokufika okuvela eYurophu ngo-2019.
Seychelles yoKhenketho bazokujoyina ngaphezulu kweengcali zokhenketho ezingama-34,000 ezimele iindawo ezingama-200 kunye neebrandi ezili-1,700 kwi-IFTM ephezulu yeResa.
UMnu Daniel Pimental uthi:
Oktobha 2, 2021 kwi-10: 29
Umvelisi wayo yonke into ukusuka kumatshini wokucoca iirobhothi ukuya kwimbiza zeti ye-elektroniki wasungula ii-smartphones ezimbini eziphambili ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, kunye neMi 11 yayo ye-Ultra enikezela ngesona sesona senzwa sikhulu sakha safakwa kwi-smartphone. Nangona kunjalo, ixabiso lokuthengisa eliqhelekileyo le-Xiaomi Smartphones lihlala liphantsi xa kuthelekiswa ne-Samsung kunye ne-Apple, eyenza ukuba ibe nomtsalane ngakumbi kubathengi.